“Caws ayay iska guranayeen, wayse dhinteen” | Hangool News
July 19, 2020 - Written by Hangool News 1
Hangoolnews:- Booliska gobolka waqooyi-bari Nigeria ee Katsina ayaa sheegay in ugu yaraan lix caruur ah ay ku dhinteen qarax ka dhacay meel tuulo ah. Qaraxa ayaa waxaa uu sidoo kale dhaawac ka soo gaaray shan caruur ah.
Gobolkan oo uu ka soo jeeda madaxweyne Muhammadu Buhari ayaa waxaa aad ugu yar qaraxyada.
Booliska gobolka Katsina ayaa sheegay in qaraxa bambaano uu dhacay kaddib markii caruur aan garaneyn bambada oo caws u jarayay xoolo xaafadeed ay soo qaadeen.
Qaraxa ayaa waxa uu gaar ahaan ka dhacay tuulada Yammama, waxayna caruurta ay waxyeellada ka soo gaartay da’doodu u dhaxeeysay 9-12 sano jir.
Shan ka mid ah caruurta uu qaraxa galaaftay noloshooda ayaa hal qoys ka soo jeeday.
Ilaa haatan macadda sababtu bambadaasi looga helay beerta ay caruurta ku le’deen hase yeeshee maamulada gobolka katsiina ayaa tibaaxay iney wadaan baaritaan ku aaddan dhacdadaani.
Ururka Boko xaaram ayaa weeraro bambaano oo isdaba joog ah ku qaada waqooyi bari ee dalkaasi Nigeria balse deegaanada dhaca waqoooyi galbeed Nigeria oo ah halka uu ka dhacay qaraaxan u dambeeyay ayaa waxay caan ku yihiin buracadda qorya ku hubeysan kuwaasi oo dil iyo afduub madax furasho ah ka geysta gobolka, waxay sidoo kale burcadaan dhacaan xoolaha la dhaqdo laakin inuu gobolaka qarax ka dhaco waa dhacdo dhif iyo nadir.
Dhacdadaan ayaa ku soo beegmeysa iyadoo shalay Burcadda dib usoo noqoneysa ee damacsan inay bulshada ka mid noqdaan ee waqooyi-galbeed Nigeria loo bandhigay inay halkii qori ee AK-47 ah ku baddashaan labo neef oo lo’ ah.
Qoraalka sawirka,Lo’da waxaa aad u qiimeeya qabiilka Fulani ee waddanka Nigeria
Maamulka dowladda hoose ee gobolka ayaa heshiiska noocaas ah la galaya dhammaan burcadda isasoo dhiibeysa.
Tallaabadan ayaa qeyb ka ah iskuday dhalinyarada hubka sharcidarrada ah heysata fursad loogu siinayo inay ka gudbaan nolosha dambiilenimada ah si ay bulshada dib ugu soo biiraan.
Waxaa mashruucan hoggaaminaya Bello Matawalle barasaabka maamul gobolka Zamfara.
Burcad mootooyin wata ayaa in muddo ahba argagax galinayay gobolkaas.
Lo’da waxay qiimo sare u leedahay bulshada qabiilka Fulani ee xoolo dhaqatada ah, kuwaasoo la rumeysan yahay inay mas’uul ka yihiin mowjadaha weerarrada ah ee ka socda gobolka.